Esi amata ọkwa batrị nke AirPods gị site na Apple Watch | Esi m mac
Otu ụbọchị ọzọ anyị ga-ekwu maka ngwaahịa ọhụrụ si Cupertino, AirPods dị ebube. Nke mbụ, anyị chọrọ ime ka o doo anya na mgbe anyị na-ekwu maka ekweisi Apple ọhụrụ ndị a, anyị apụtaghị na ha bụ nhọrọ kachasị mma n'ahịa ma ọ bụ na ha nwere atụmatụ dabara adaba maka ụdị mmadụ niile, n'agbanyeghị m uto ha soro ihe niile m na-arịọ.
Enwere ọtụtụ ndị na-eso ụzọ na-akatọ ụzọ ha nwere, nke di na EarPods, ebe ọ bụ na ha adabaghị na ntị nke ọtụtụ ndị. Ọ bụ eziokwu na ọ gaghị adabara ụdị ndị ọrụ niile, mana ọ bụghị ihe kpatara ị ga - eji kwuo na ha abụghị nhọrọ dị mma maka nke ahụ ... Ferrari abụghị maka mmadụ niile yabụ na ha abụghị ụgbọ ala ọjọọ. .. hehehe
Taa ihe anyị chọrọ ịkọwara gị bụ otu esi lee batrị gị AirPods na Apple Watch gị. Dịka ịnwere ike ịmara, AirPods na-abata na batrị nke na-enye gị ohere ịmegharị maka ya oge kachasị nke 24 awa iji. Batrị ndị AirPods nwere pere mpe mana n'agbanyeghị nke ahụ, ụgwọ izizi zuru ezu ewepụburu na nke a na-enye opekata mpe elekere ise.
Ọ dị mma, iji hụ batrị nke AirPod gị hapụrụ, ị nwere ike ịme ya n'ụzọ dị iche dabere na ngwaọrụ ebe ị na-eji ha. Na Mac ị ga - ahụ ole batrị ha hapụrụ site na ịpị akara ngosi nke Bluetooth> AirPods. Ga-ahụ na a adaala na-egosi na nke Ọ na - egosi gị ụgwọ nke ekweisi na nke ọ bụla nwere.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ bụ Apple Watch gị ọ bụghị iPhone gị nke ị na-ebu, ị ga-ahụkwa ụgwọ ole fọdụrụnụ ogologo oge mee ka AirPods jikọta ya na nche. Iji jikọọ ekweisi na nche, ihe niile ị ga - eme bụ slide site na mpụga nche ahụ site na ala iji gosipụta ngalaba nchịkwa ebe anyị nwere ike pịa akara ngosi iji zipu ụda na AirPods.
Mgbe anyị pịrị na AirPods, anyị nwere ike ịpị otu ihuenyo ahụ na akara ngosi batrị nke Apple Watch hapụrụ iji gosi anyị ihuenyo nke a gwara anyị banyere batrị nke ekweisi nke ọ bụla hapụrụ. N'ihe banyere Apple Watch, ị nwere ike ịhụ ụgwọ site na ekweisi ma ọ bụghị site na ikpe ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Otu esi amata ọkwa batrị nke AirPods gị site na Apple Watch
Na February 5 isi ụlọ ọrụ mba ofesi nke iTunes ga-anọ na Ireland